ရဲရာထူးခန့်ချုပ်က သူ့ကိုလိင်အမြတ်ထုတ် ကာအခွင့်ရေး ယူသွားတာဖြစ်လို့ ရဲမေ ၁၈ ယောက်ကို ပြန်တရားစွဲဖို့ စီစဉ်နေဟုပြော – Myanmar Update News
June 30, 2020Up To Date0 Comments
ရဲရာထူးခန့်ချုပ် ဘာကြောင့်ရူး ရလဲ ရှင်းပြီ ..” ကျနော့် ကို လိင်အမြတ် ထုတ် အခွင့်အေ ရး ယူသွားတာဖြစ်လို့..အဲ့ဒီ့ ရဲမေ ၁၈ ယောက်ကို ပြန်တရားစွဲဖို့ စီစဉ်နေဟုဆို “
ရဲရာထူး ခန့်ချုပ် ဇော်မိုးသန်း အနေဖြင့် ၎င်းအား တိုင်ကြားထား သည့် ရဲမေ ၁၈ ဦးအပေါ် ကာမလာဘ်ထိုးမှု အပါအဝင် စိတ်ရောဂါ ဖြစ်ပေါ် ခံ စားရမှု တို့အတွက် တရားစွဲ ဆိုဖွယ် ရှိကြောင်း ရဲရာထူးခန့်ချုပ်ဇော်မိုးသန်းနှင့် နီးစပ်သူများ ထံ မှ သိရသည် ။
ထိုကိစ္စ နဲ့ပတ်သက်၍ ဦးဇော်မိုးသန်းအား မေး မြန်းရာ ၎င်းမှယခုလိုမျိုး ဖြေကြားခဲ့ ပါသည်။ “ညည်းတို့ ရာထူးတိုး လိုချင်ရင်တော့ ငါနဲ့ လာအိပ်ရမယ် လို့ နောက်ပြောင် ကျီစယ်တဲ့သဘော နဲ့ ကိုဌေးဦး လိုပဲ လွှတ်ခနဲပြောမိ လိုက်ရုံပါ..”. ဒါကို သူတို့က အတည်ပြော တယ်ထင်ပြီးရောက် လာတော့ လည်း ကိုယ့်ကုသိုလ် နဲ့ကိုယ်ပဲလေ လို့မှတ် ယူလိုက်လျော ခဲ့တဲ့သဘောပါပဲ….”
တနည်းအားဖြင့် ပြောရရင် သူတို့ကသာ ကျနော့ကို လိင်အမြတ်ထုတ် အခွင့်အရေး ယူသွားတာဖြစ်လို့.. ကျနော့ဘက် က တရားစွဲ သင့်တယ်လို့ ယူဆမိ ပါတယ်… ဒါ့အပြင် ကျနော့အနေနဲ့ တပ် မတော်ကို စတင်ပြီး ဝင်ရောက် စဉ်ကနေ အသွင်ပြောင်းပြီး ရဲရာထူးခန့်ချုပ် ဖြစ်လို့
အခင်း မဖြစ်ပွားခင် အချိန်ထိ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ပကတိ ကျန်းမာခဲ့ပေမဲ့ အခုလိုတိုင်တန်းမှုတွေဖြစ်မှ ရုတ်ချည်း စိတ်ဝေဒနာသည် ဘဝရောက်ရတာဟာ အဲ့ဒီ ၁၈ယောက်နဲ့ အိပ်ပြီးမှ ဖြစ်လာရတာကြောင့် ကျနော့ရဲ့
စိတ်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းမှုဖြစ်ရ တဲ့ တရားခံဟာ အဲ့ဒီ ၁၈ ယောက်ကြောင့်ဆိုတာ ထင်ရှားသိသာ တဲ့ အတွက် သူတို့ကိုတရားစွဲဖို့ စီစဉ်တာဖြစ်တယ်’ လို့.…ရဲရာထူးခန့်ချုပ်ဇော်မိုးသန်း မှ ပြန်လည်ပြော ဆိုထားကြောင်း သိရသည် ။
စိုင်းမဟာထွန်း(အသေးတန်း သတင်းထောက်) ZN.H
ရဲရာထူးခနျ့ခြုပျက သူ့ကိုလိငျအမွတျထုတျ ကာအခှငျ့ရေး ယူသှားတာဖွဈလို့ ရဲမေ ၁၈ ယောကျကို ပွနျတရားစှဲဖို့ စီစဉျနဟေုပွော
ရဲရာထူးခနျ့ခြုပျ ဘာကွောငျ့ရူး ရလဲ ရှငျးပွီ ..” ကနြျော့ ကို လိငျအမွတျ ထုတျ အခှငျ့အေ ရး ယူသှားတာဖွဈလို့..အဲ့ဒီ့ ရဲမေ ၁၈ ယောကျကို ပွနျတရားစှဲဖို့ စီစဉျနဟေုဆို
ရဲရာထူး ခနျ့ခြုပျ ဇျောမိုးသနျး အနဖွေငျ့ ၎င်းငျးအား တိုငျကွားထား သညျ့ ရဲမေ ၁၈ ဦးအပျေါ ကာမလာဘျထိုးမှု အပါအဝငျ စိတျရောဂါ ဖွဈပျေါ ခံ စားရမှု တို့အတှကျ တရားစှဲ ဆိုဖှယျ ရှိကွောငျး ရဲရာထူးခနျ့ခြုပျဇျောမိုးသနျးနှငျ့ နီးစပျသူမြား ထံ မှ သိရသညျ ။
ထိုကိစ်စ နဲ့ပတျသကျ၍ ဦးဇျောမိုးသနျးအား မေး မွနျးရာ ၎င်းငျးမှယခုလိုမြိုး ဖွကွေားခဲ့ ပါသညျ။ “ညညျးတို့ ရာထူးတိုး လိုခငျြရငျတော့ ငါနဲ့ လာအိပျရမယျ လို့ နောကျပွောငျ ကြီစယျတဲ့သဘော နဲ့ ကိုဌေးဦး လိုပဲ လှတျခနဲပွောမိ လိုကျရုံပါ..”. ဒါကို သူတို့က အတညျပွော တယျထငျပွီးရောကျ လာတော့ လညျး ကိုယျ့ကုသိုလျ နဲ့ကိုယျပဲလေ လို့မှတျ ယူလိုကျလြော ခဲ့တဲ့သဘောပါပဲ….”
တနညျးအားဖွငျ့ ပွောရရငျ သူတို့ကသာ ကနြော့ကို လိငျအမွတျထုတျ အခှငျ့အရေး ယူသှားတာဖွဈလို့.. ကနြော့ဘကျ က တရားစှဲ သငျ့တယျလို့ ယူဆမိ ပါတယျ… ဒါ့အပွငျ ကနြော့အနနေဲ့ တပျ မတျောကို စတငျပွီး ဝငျရောကျ စဉျကနေ အသှငျပွောငျးပွီး ရဲရာထူးခနျ့ခြုပျ ဖွဈလို့
အခငျး မဖွဈပှားခငျ အခြိနျထိ ကိုယျရောစိတျပါ ပကတိ ကနျြးမာခဲ့ပမေဲ့ အခုလိုတိုငျတနျးမှုတှဖွေဈမှ ရုတျခညျြး စိတျဝဒေနာသညျ ဘဝရောကျရတာဟာ အဲ့ဒီ ၁၈ယောကျနဲ့ အိပျပွီးမှ ဖွဈလာရတာကွောငျ့ ကနြော့ရဲ့
စိတျကနျြးမာရေးခြို့ယှငျးမှုဖွဈရ တဲ့ တရားခံဟာ အဲ့ဒီ ၁၈ ယောကျကွောငျ့ဆိုတာ ထငျရှားသိသာ တဲ့ အတှကျ သူတို့ကိုတရားစှဲဖို့ စီစဉျတာဖွဈတယျ’ လို့.…ရဲရာထူးခနျ့ခြုပျဇျောမိုးသနျး မှ ပွနျလညျပွော ဆိုထားကွောငျး သိရသညျ ။
စိုငျးမဟာထှနျး(အသေးတနျး သတငျးထောကျ) ZN.